Gottes Geschenk an die Menschheit | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
Ao amin'ny tontolo andrefana, ny krismasy dia fotoana iray itodihan'ny olona maro manome sy mandray fanomezana. Ny fisafidianana fanomezana ho an'ny havany matetika dia manaporofo fa olana. Ny ankamaroan'ny olona dia mankafy fanomezana manokana sy manokana izay voafidy tamim-pitandremana ary manana fitiavana be dia be na natao ho an'ny tenany manokana. Toy izany koa, Andriamanitra dia tsy manomana ny fanomezana vita ho an'ny olombelona amin'ny minitra farany.
«Na dia talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao aza, i Kristy dia voafidy ho toy ny zanak'ondry, ary ankehitriny, amin'ny faran'ny fotoana, dia niseho teto an-tany Izy noho ny tenanao» (1 Petera 1,20). Talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao dia nikasa ny fanomezany lehibe indrindra Andriamanitra. Nambarany taminay 2000 taona lasa izay ny fanomezana mahafinaritra an'i Jesosy Kristy zanany malala.
Andriamanitra dia sariaka amin'ny olona rehetra ary maneho ny fony lehibe, hany ka nofeheziny tamim-panetren-tena tamin'ny zanany ny zanany lahy ary napetrany tao anaty cribre: "Izy izay, tamin'ny endrika masina, dia tsy nihevitra azy ho fandrobana raha tsy mitovy amin'Andriamanitra. fa naneho ny tenany sy naka endrika endrika ho mpanompo, nekena ho olombelona ary toa nekena ho olombelona. Nanala-baraka ny tenany ary nanaiky ny fahafatesana, eny hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana » (Filipiana 2,6-8).
Vakiantsika eto ny momba ny mpanafaka sy ny halehiben'ny fitiavany antsika sy ny zanak'olombelona rehetra. Manafoana ny hevitra rehetra fa mafy orina Andriamanitra. Ao anatin'ny tontolo feno fijaliana, fifandonana mitam-piadiana, fanararaotam-pahefana sy loza vokatry ny toetr'andro, mora ny mino fa tsy tsara Andriamanitra na i Kristy no maty ho an'ny hafa, fa tsy ho ahy ihany. «Fa ny fahasoavan'ny Tompontsika dia nihalehibe, niaraka tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Marina tokoa izany ary ilaina ny tenin'ny finoana: Kristy Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao hamonjy ny mpanota, izay isan'izy ireo » (1 Timoty 1,15).
Ao amin'i Jesosy dia ahitantsika Andriamanitra afaka tiantsika, Andriamanitra tsara, tsara fanahy ary be fitiavana. Tsy misy olona tafasaraka amin'ny fikasan'Andriamanitra hanavotra ny olona rehetra amin'ny alàlan'ny fanomezany an'i Jesosy Kristy, fa tsy ny milaza azy ho tena mpanota ratsy indrindra aza. Fanomezana manavotra ny zanak'olombelona mpanota izany.
Rehefa mifanakalo fanomezana amin'ny Krismasy isika dia fotoana tsara hieritreretana ny amin'ny alàlan'ny fanomezana nomen'Andriamanitra an'i Kristy dia fifanakalozana lehibe lavitra noho izay omentsika tsirairay. Izy io dia ny fifanakalozana amin'ny fahotantsika ny fahamarinany.
Ireo fanomezam-pahasoavana izay hifanomezantsika dia tsy ny tena hafatra amin'ny krismasy. Izy io dia fampatsiahivana ny fanomezana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Andriamanitra dia manome antsika ny fahasoavany sy ny fahatsarany ho fanomezana maimaimpoana ao amin'i Kristy. Ny valiny mifanaraka amin'ity fanomezana ity dia ny mandray izany amim-pankasitrahana fa tsy handà izany. Ity fanomezana iray ity dia ahitana fanomezana maro hafa izay manova ny fiainana, toy ny fiainana mandrakizay, famelan-keloka ary fiadanam-panahy.
Angamba izao no fotoana mety aminao ho anao, ry mpamaky, ilay fanomezana lehibe indrindra azon'Andriamanitra omena anao, ka ekeo amim-pankasitrahana ny fanomezana an'i Jesosy Kristy Zanany malala. I Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty izay te hitoetra ao aminao.